प्रदिप नेपालले भने : माधव कमरेड! तपाईंबाट धोका भयो, ‘गुडबाइ’ « AayoMail
प्रदिप नेपालले भने : माधव कमरेड! तपाईंबाट धोका भयो, ‘गुडबाइ’
2021,30 August, 3:28 pm
काठमाडौं – माधव नेपाललाई साथ दिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लागेका प्रदिप नेपालले धोका पाएको बताएका छन्। उनले माधव नेपालले झेली कुरा गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
फेसबुकमार्फत गुनासो राख्दै नेता नेपालले बारम्बारको कुराकानीमा आफूले माधव नेपाललाई जबज नहुने भए नवगठित पार्टीमा आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गरेको भए पनि अहिले धोका पाएको बताएका छन्। उनले माधवको साथ छोडेको संकेत गर्दै अन्तिममा ‘बिदा’ लेखेका छन्।
प्रदिप नेपालले आफू केपी ओलीसँग पनि नजाने बताएका छन्। उनले आफू तानाशाही प्रवृत्तिको सधैं विरोधी भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘माधव कमरेड, म केपीसँग जान्न। किनभने तानाशाही प्रवृत्तिको म सधैं विरोधी हुँ। तपाई पनि झेली कुरा गर्न सिक्नु भएछ। बारम्बारको कुराकानीमा मैले जबज हुँदैन भने मेरो नाम नलेख्नुस भनेको थिएँ। तर आखिरमा तपाईंबाट पनि मैले धोकाकै उपहार लिएर जानु पर्ने भो। बिदा।’. उनले लेखेका छन्।